Airtel sy MPTDN : miara-miady amin’ny Covid-19 | NewsMada
Manampy ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ny Airtel Mada­gasacar amin’izao ady atao amin’ny Covid-19 izao. Omaly, teny amin’ny Artec Ivandry, natolotra ny MPTDN ny arovava azo sasana 10 000 sy kit hifandraisan’ireo toeram-pitsaboana amin’ny internet. Porofoin’ ny Airtel ny fanohanana ny va­hoaka malagasy.
Manenika ny faritra rehetra eto Madagasikara ny anaovan’ny Airtel Madagas­car ezaka ho fano­ha­na­na ny Malagasy. Ho valin’ny antso nataon’ny MPTDN nitondrana izao fa­nampiana izao. « Tena mihanaka ny Covid-19, miatrika izany tsimokaretina izany da­holo isika, ary efa mamono olona betsaka. Ho fiaraha-miasanay amin’ny governemanta amin’ny alalan’ny MPTDN, miezaka izahay ma­nohana ny mponina amin’ny ady atao aminy sy manamora ny fahazoana vaovao amin’ny internet », hoy ny tale jeneralin’ny Airtel, i Eddy Kapuku. «Mi­saotra betsaka ny Airtel izahay amin’izao hetsika fanehoana firaisan-kina izao, ma­noloana ity valanaretina ma­mely mafy ny firenena ity », hoy ny minisitry ny MPT DN, Ramaheri­jaona Andria­ma­nohisoa.
Mitantana ny ady amin’ny Coronavirus any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany ity minisitera ity, manentana ny mponina any an-toerana amin’izay fepetra tsy maintsy atao rehetra mba tsy hampihanaka ny aretina. Mari­hina fa betsaka ny efa ezaka nataon’ny Airtel hiadiana amin’ny Covid-19 ; hetsika fanehoana firaisan-kina amin’ny fanjakana sy ny vahoaka manontolo.